Owona msebenzi wam ubalaseleyo | Martech Zone
Eyona Misebenzi yam mikhulu
NgoLwesibini, Meyi 22, 2007 NgoLwesithathu, Meyi 23, 2007 Douglas Karr
Abahlobo bam abasenyongweni bayayiqonda indlela endizithanda ngayo ngomsebenzi wam wobugcisa. Kuya kufuneka ndikuxelele ukuba nokuba ndizama kangakanani ukuphucula imeko yam kwiprojekthi, ingqesho, ikhondo lomsebenzi… ayonto xa ithelekiswa nento endinayo ekhaya, nyana wam. ityala kunye nentombi yakhe uKatie. Ukuba ndadibana nesiphelo sam ngomso, ndingalishiya eli hlabathi ndisazi ukuba ndishiye umfana nentombazana ekwishumi elivisayo abanetalente, abonwabileyo, abangazicingeliyo, abanothando, abathembekileyo nabasebenza nzima.
Unyana wam uyandimangalisa ngalo lonke ixesha ethatha ikatala, imakrofoni, okanye edibanisa umculo wakhe kwiPC yakhe. Uyaqala IUPUI, ukuthatha isidanga seFizikiki kwaye usenokuba mncinci nakweyiphi na indawo, kubandakanya isiFrentshi, iAustralia yobunjineli, okanye iNzululwazi yezoPolitiko. Kuya kufuneka umamele ezinye ze umculo wakhe kwindawo yakhe ukuva italente yakhe, kodwa ndicinga ukuba uya kuvuma.
Ngeempelaveki okanye njalo, abantwana bachitha ixesha abalithandayo noMama wabo. Nangona siqhawule umtshato ngaphezulu kweminyaka emi-5, ulwalamano oluhle esinalo sonke kwaye ngamnye kuthi uphethe omnye ngelona xabiso liphezulu. Abantwana abafuneki ukuba basive sisilwa, kuba eyona njongo yethu kukuba bonwabe kwaye benze konke esinako ukukwenza oko.
Omnye umzekelo, ndayalela amanye amakhadi okuthweswa izidanga ukuba uBill amnyusele imali yekholeji. Ufuna imoto kwaye uzakufuna imali yeencwadi, ndicinga ukuba uzakulunga kwizifundo kodwa kungathatha imali mboleko nangoku. Sobona. Ngapha koko, uMama wakhe wazithumela zonke izaziso kusapho kunye nabahlobo kunye nosapho kunye nabahlobo. Kuhle kakhulu. (Kubo nabaphi na abazali abaqhawula umtshato okanye abaqhawule umtshato… KUMalunga NABANTWANA!)
Sichitha imizuzu engama-45 siqhuba sicula iingqondo zethu. Abantu abaqhuba kufuneka bacinge ukuba siyaphambana kwaye undwendwe olunqabileyo kwidrive luhlala lutsibela kanye kumdlalo nathi. Eyona nto siyithandayo kukuphuma esihogweni yi Meatloaf… kodwa simamela kwaye siculele yonke into. Kukho izikhululo ezingama-70s kunye nee-80s endleleni ngenxa yoko akukho nto imiselweyo.
Kwaye xa sicula, sibeka yonke into kuyo… kokukhona i-theatrics kunye nokubhomboloza okuhlaba indlebe, kokukhona kungcono. (Siphazamisa ukucula kube kanye ngexesha lomdlalo endiwuthandayo, "Guess that roadkill"). Ngexesha lokufika kwe-50B, sihlala siphelelwa ngumoya, ngaphandle kwelizwi, kwaye sihleka ngathi siphambene.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, intombi yam yathatha inxaxheba kukhuphiswano lokucula eIndiana eBloomington. Kwaphantse kwaba yintlekele - isitshixo sokuqala safika kwaye uKatie wayilibala yonke ingoma. Uye wakhala, waziqamba, waqala waphinde wacula. Khange ndimncede- bendisazi ukuba kufuneka azitsale umva (kodwa inkwenkwe siye sangana emva kokuba sigqibile). UKatie wenzakele esenza umsebenzi omhle kwaye wayifumana iGolide.
Ngokuhlwanje ibiyiKonsathi yaseNtwasahlobo eGreenwood Middle School yeklasi ye-6, 7th, kunye neyesibhozo. UKatie wayenodlala yedwa, "Portrait in Blue" kwaye ebeyicula inyanga yonke ejikeleze indlu. Ndamnika isiluleko esincinci ngaphambi kokuba aqhubeke ngokuhlwanje-fumana indawo kwaye uyijonge. Kwakukho ikhulu labazali kunye nabafundi ekhonsathini ngokuhlwanje ndaye ndazi ukuba uzokoyika. Phambi kokuba aqhubeke, wandixelela ukuba uyandiculela.
Kudala ndicinga ngoKatie imini yonke yanamhlanje kwaye uza kwenza njani. Kwaye nkwenkwe, ngaba yena! Yaduma yodwa yedwa ejimini kwaye iintloko zabantu zajika. Andinayo ikhamera yevidiyo elungileyo kodwa ndikhuphe ifowuni yam yekhamera ye-PDA kwaye ndarekhodisha umsitho. Ndiyaxolisa ngobunjani bomgangatho kwaye isandi asikhwaza kakhulu, kodwa unokuqiniseka ukuba uva uKatie ecula i-blues.
Ndingaba ndiyaxoka ukuba ndingathi andininyembezi. Andikwazi ukuchaza ngamagama indlela ebingakholeleki ngayo. Abantu abajikeleze mna bajike bathi, “Yintombi yakho leyo? Wayemnandi! ”. Ukujonga uKatie kwaye ndabona ukuba wonwabe kangakanani. Abantwana bam bobona bugcisa bam bukhulu.
Akukho nto iya kuze isondele.
Meyi 23, 2007 kwi-3: 05 AM
Iposi enkulu uDoug! Yifunde ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni, phezulu ukuya kuKatie!
Meyi 23, 2007 kwi-8: 43 AM
Enkosi, Tony. NdinguPapa omnye onekratshi!
Meyi 23, 2007 kwi-3: 45 AM
Kuyamangalisa indlela abantwana abakhula ngokukhawuleza ngayo.
Kwaye njengesicatshulwa sosuku: "Ubundlobongela yile nto abazali babantwana abakrelekrele bakholelwa kuyo."
Kwaye, awunguye owabhloga ngokubamba umxholo wakho? Kodwa zimbini iividiyo zokugqibela apho zombini iYouTubeGoogled?
Meyi 23, 2007 kwi-10: 19 AM
Iposi entle uDoug. Ndinonyana endleleni, kwaye ndinethemba lokuba ndiza kuba nakho ukuba ngumzali kuye.
Ndicinga ukuba kuyamangalisa ukuba uyakwazi ukugcina ubudlelwane obunempilo nomfazi wakho wangaphambili. Njengoko usitsho, yenzelwe abantwana, kwaye ayincedi nganto ukuba usilwa ngalo lonke ixesha kwaye udlalela abantwana omnye komnye njengohlobo lomdlalo weengqondo ojijekileyo. Ndandinabahlobo ndikhula ndinabazali abanje, kwaye kubuhlungu ngokwenene ukubona.
Meyi 23, 2007 kwi-10: 43 AM
Ndiyakuvuyela uBrandon! Ndenze itoni yeempazamo endleleni, ndikholelwe. Ndithethile izinto ebantwaneni bam endaziyo ukuba ziyabenzakalisa xa bendinomsindo kwaye ngamanye amaxesha andibaniki ingqalelo ebafaneleyo. Kodwa ngalo lonke ixesha siza kuba kude omnye komnye sixelela omnye ukuba siyathandana-nokuba sele sinomsindo. Kwaye siwola… kakhulu!
Ndinyanisile nakubantwana bam ngeempazamo endizenzileyo kwaye ndiyaxolisa xa ndizenzile izinto ezingalunganga ngabo. Kangangoko ndinako, ndiyabavumela ukuba bazenzele ezabo izigqibo emva koko sixoxe ngeziphumo zezo zigqibo.
Unyana wam uhlekisa ngokuba ubuhlobo bethu busondele kangakanani. Sihlala kunye njengabahlobo bakhe. Kwi-IUPUI, uza kuhlala ekhaya! Ndisengumphathi (okwangoku).
Meyi 23, 2007 kwi-3: 36 PM
UDouglas, loo nto yayintle kakhulu. Enkosi ngokwabelana nathi sonke. Kunika umdla ukuba nidlala njani nonke emotweni. Nina bantwana ninethamsanqa lokuba nani… uthixo asikelele !!
Meyi 23, 2007 kwi-7: 48 PM
Enkosi u-Doug-ndijonge phambili ekubeni ngumzali, kodwa ndizifumanise ndinexhala lokwenza umsebenzi olungileyo kwaye ndingabatyhafisi abantwana bam.
Ndicinga ukuba uthini malunga nokunyaniseka kubo malunga neempazamo ozenzileyo ebomini bakho, kwaye ukubayeka bazenzele izigqibo ngokuqinisekileyo yindlela yokuhamba. Kukho izifundo ekufuneka uzifundele zona, nokuba inzima indlela.